Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1561
Manomboka anio : hihatsara ny toetry ny andro
Hihatsara ny toetry ny andro manerana ny Nosy manomboka anio. Hidina ny habetsahan’ny rotsak’orana ho an’ny efatra andro manaraka. Ahina kosa anefa ny oram-baratra eto afovoan- tany sy ny faritra atsimo atsinanana vokatry ny fisian’ny andro ratsy fahefatra ao amin’ny ranomasina Indianina. Ahina ny mety ho fiakaran’ny rano vokatr’izany amin’ny distrikan’i Betafo, Faratsiho, Antsirabe, Ambatofinandrahana, […]
Banky Iraisam-pirenena : mila ezaka ny fitantanam-panjakana
Par Taratra sur 10/02/2016 Economie, NS Malagasy
Vonona hamatsy vola 230 tapitrisa dolara isan-taona (mandritra ny telo taona) ny Banky iraisam-pirenena. Hanampiana ny firenena marefo io vola io, saingy mila miezaka ny fanjakana amin’ny fomba fitantanany sy fampandrosoany an’i Madagasikara. Nampahafantarina ny mpanao gazety, omaly, ny famatsiam-bola ho an’i Madagasikara avy amin’ny Banky iraisam-pirenena. Nilaza ny talen’ny tetikasa ho an’i Madagasikara, Mark […]
Andranofeno : maro lafy ny fotodrafitrasa ho an’ny sahirana
Hotokanana anio ny fotodrafitrasa maro lafy izay vita eny Andranofeno Atsimo, toerana itobian’ireo fianakaviana sahirana sy rava trano nandritra ireny fandalovan’ny rivodoza tamin’ny taon-dasa ireny Tafiditra ao anatin’ny asa vita zato andro andiany faharoa nataon’ny minisitera maromaro miandraikitra ny sehatra sosialy ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa ireo. Natsangana ny trano honenan’ireo fianakaviana nanapa-kevitra ny hihary eny […]
Tanora tsy tara – Fetin’ny mpifankatia : efa lasa raiki-tampisaka eto amintsika
“Fetin’ny mpifankatia”, efa saika lasa raiki-tampisaka eto amintsika ny fankalazana azy. Mitobaka ny fanomezana eny an-tsena. Saingy, tsy voatery amin’ny androm-pankalazana ihany anefa vao afaka manaporofo ny fifankatiavana eo amin’ny olon-droa miaraka. “Saint-Valentin”. Betsaka no efa mandika azy io ho “Fetin’ny mpifankatia”, hatramin’izay ka hatramin’izao. Tsy kolontsaina malagasy loatra izy io, saingy efa tafiditra eto […]
Goût de/Good France : eto amintsika ny 8 amin’ireo trano fisakafoana 1.500
Le B, 313, Oasis, Kudéta, Lartistika, Café de la Gare, Tsara be vaovao ary ny La Table des Hautes Terres. Ireo ny trano fisakafoana eto amintsika, handray anjara amin’ny « Goût de/Good France », hetsika karakarain’ny minisitera frantsay misahana ny raharaham-bahiny entina manandratra hatrany ny haify an-dry zareo frantsay. Tonga amin’ny andiany faharoa ny « Goût de/Good France », […]
Hizara « Fitia mandrakizay » ny Mage 4
Elaela tsy nisy ny seho an-tsehatra goavana. Fantatra kosa izao fa nisafidy ny manodidina ny fankalazana ny fetin’ny mpifankatia ny tarika Mage 4, hanomezany fotoana ireo mpankafy. « Fitia mandrakizay », izay nalaina tamin’ny hiran’izy ireo ihany, no hampisalorana ny fampisehoana hotontosaina ny alin’ny zoma 12 febroary izao, manomboka amin’ny 9 ora etsy amin’ny Dôme Ankorondrano. Mazava […]
Fijoroan’ny andrimpanjakana : tafapetraka ny birao maharitry ny Antenimierandoholona
Par Taratra sur 10/02/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Tsy niandry ela. Nofidina omaly avy hatrany taorian’ny nifidianana ny filohan’ny Antenimierandoholona ny handrafitra ny birao maharitra, hotarihin’ny Pr Rakotomanana Honoré. Voafidy ho filoha lefitra voalohany ny Praiminisitra teo aloha, Kolo Roger. Loholon’ny HVM avy any amin’ny faritanin’i Toliara. Nahazo vato 56 amin’ny 61 izy. Voafidy ho filoha lefitra faharoa kosa ny loholona Malo […]
Loholona Ramalason Olga : « Tsy mpanohitra izahay… »
Nitondra ny heviny momba izao fijoroan’ny Antenimierandoholona izao ny loholona Tim, Ramalason Olga. « Tsy ho mpanohitra be fahatany izahay… Tsy nanolotra kandidà ho filohan’ny Antenimierandoholona ny Tim noho ny fahatsapana fa manana ny traikefa sy efa nitondra ity andrimpanjakana ity ny filoha Rakotomanana Honoré, ny taona 2001-2002. Olon-kendry sady manana ny maha izy azy izy », […]
Hetra ACD : andrasana ny tena finiavan’ny fanjakana
Tsy vaovao intsony! Tsy vao izao ny sehatra tsy miankina niteny fa tsy mifanaraka amin’ny lafiny lalàna ny “hetra terena” hataon’ny fanjakana, amin’ny fanafarana sy fanondranana entana avy any ivelany, Advanced Cargo Declaration (ACD). Efa ela ny mpandraharaha tsy miankina nitaky fifampidinihana, toy ny Vondron’ny mpandrahaaha eto Madagasikara (Gem), fa nanao bemarenina foana ny fanjakana. […]
Andramena : mitaky sazy ny mpanao trafika ny vondrona iraisam-pirenena
Niaiky ny fanjakana, tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny Tontolo iainana, fa ny vokatra azo tsapain-tanana, manasazy ny tompon’andraikitra amin’ny fanaovana trafika amin’ny andramena no tena andrasan’ny vondrona iraisam-pirenena, toy ny Cites. Hanamarinana izany, niova ny voambolana nampiasain’ny minisitry ny Tontolo iainana, omaly, ary sahiny novaina ny fiteniny, fa tsy ny hivarotana ny tahiry andramena nogiazan’ny fanjakana no […]
Mijoro ny birao maharitry ny Antenimierandoholona. Saro-toerana kosa ny eo anivon’ny Antenimierampirenena, misy ny fangatahana hanova ny birao maharitra. Eo am-pananganana birao maharitra ny Antenimierandoholona, amin’izao fotoana izao. Ny eo anivon’ny Antenimierampirenena kosa, saro-toerana tanteraka… Mandeha indray ny resaka ny amin’ny tokony hanovana ireo mpikamban’ny birao maharitra. Efa misy aza ny tsilian-tsofina ny amin’ny fisian’ny […]
Par Taratra sur 10/02/2016 En Bref, NS Malagasy
Efa tafaverina an-tanindrazana ny ben’ny Tanàna, Ravalomanana Lalao, rehefa avy niatrika ny fivorian’ny ben’ny Tanàna aty amin’ny ranomasimbe Indianina, tatsy amin’ny Nosy La Réunion ny herinandro teo. Nifampizara traikefa sy ny fomba fitantanana ary nitady fiaraha-miasa ny tenany tamin’izany. Hamoaka ny bokikely mirakitra ny fanambarana nataony tamin’ny taona 2015 ny fiarahamonim-pirenena Sefafi, ny zoma izao. […]
Miaramila malagasy : niofana tamin’ny Cutlass express 2016
Niofana tao amin’ny fandaharan’asa Cutlass express 2016 ireo miaramila malagasy an-dranomasina, mpampiasa ny RC Trozona. Vita ny faran’ny herinandro teo ity karazana fanazarantena nokarakarain’ny Forces navales des USA en Europe-Afrique ity, izay ahitana firenena 18 mandray anjara amin’izany, ka anisan’izany ny miaramila malagasy. Fanamafisana ny fiaraha-miasa amin’ny lafiny fifanakalozam-baovao, fiarovana ny ranomasina sy ny asa […]
Nanao diabe ny mpianatry ny oniversite Fianarantsoa, omaly. Niatrana ny Emmo/Reg nanoloana izany. Efa nangitakitaka nahita ny hamaroan’ny mpianatra ny olona. Nitokona ireo mpianatry ny oniversiten’Andrainjato, Fianarantsoa, omaly. Nivory tao amin’ny faritry ny oniversite ireo mpianatra ary nanapa-kevitra fa hanao diabe hamakivaky ny tampon-tanànan’i Fianarantsoa. Niroso tamin’izany tokoa ireo mpianatra, izay efa nandrasan’ny Emmo/Reg teny […]
Analakely : nampitandrina ireo mpivarotra amoron-dalana ny Jly Florens
Hentitra ny jeneraly Florens, omaly, nanoloana ireo mpitarika ny hetsik’ireo mpivarotra amoron-dalana fa tsy hitsitsy intsony ny Emmo/Reg, anio, manoloana ireo mpanohintohina ny filaminam-bahoaka sy ny mpanelingelina ny fifamoivoizana. Milaza hiroso amin’ny fisamborana sy ny fanaparitahana amin’izay izy ireo, raha mbola manao ny ataony ireo mpivarotra amoron-dalana. Ireto farany, nanohy ny hetsika fanaony amin’ny fitakiana […]
Manjaka tanteraka ireo jiolahy manendaka any anaty fitohanan’ny fifamoivoizana eny Faravohitra. Manao andiany ireo jiolahy sady mitondra sabatra. Mitebiteby ny olona eny an-toerana satria tsy afa-manoatra manoloana ireo jiolahy. Manahy ny sasany amin’izy ireo fa mety hiitatra hanafika trano ry zalahy rehefa tsy mahita fiara hoendahina. Jiolahy miisa efatra nitondra basy iray no tompon’antoka […]
Antenimierandoholona : voafidy ho filoha Rakotomanana Honoré
Fombafomba fotsiny sisa… Voafidy ho filohan’ny Antenimierandoholona Rakotomanana Honoré, tamin’ny fivoriana manokan’ny Antenimierandoholona teny amin’ny lapan’Anosikely, omaly. Kandidà tokana tsy nisy mpifaninana izy, zokiolona indrindra, ary natolotra ny antokom-pitondrana maro anisa izay manana loholona 34 amin’ny 63 mandrafitra io andrimpanjakana io. Nahazo vato 60 amin’ny 62 izy, ary nanao vato fotsy roa. Tsy tonga ny […]
Ralay Christian : “Tsy manao kolikoly amin’ny voafonja ny mpiandry fonja”
Manoloana ny nahavoatifitra an’i Dorice, jiolahy nitsoaka ny fonja tao Ambalatavoahangy izay lavon’ny zandary tao Anivorana ny herinandro lasa teo, nitondra fanamarihana, ny lehiben’ny fonja amin’ny filazan’ny olona sasany fa voafonja niniana nampandosirina iny voafonja iny. “Noho ny olana amin’ny tsy maintsy mampiasa kitay ny fonja saika ireny gadra be efa voatsara ireny no azo […]
Par Taratra sur 10/02/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Tombanana ho 20 hatramin’ny 23 taona eo ho eo ity vehivavy hita faty teo Salazamay, Toamasina, omaly maraina ity. Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana, satria norasarasaina, niparitaka tanteraka ny vatany. Tsy hita teo kosa anefa ny foto-peny, ny tendany, ny lelany, ny fivaviany ary ny fony. Halatra taova ? Nampihoron-koditra ! Fatim-behivavy iray notapatapahina valo no […]
« Précédent 1 … 1 559 1 560 1 561 1 562 1 563 … 1 596 Suivant »